आई लभ यू बाबा::Nepal's Online News Portal
आई लभ यू बाबा
कति स्वार्थी हुन्छ दुनिया कति सजिलै आफ्नो कसम फेरछ मान्छे। सायद उसलाई लाग्छ उसको दिल कहिल्यै दुःख्दैन वा उसलाई कसैले हर्ट नै गर्दैन।
आज मैले यो लेखिरहदा अझै तिमीलाई छूने छैन थाहा छ मनभित्र को भाब पोखने अरु माध्यम नै पाइन। र कोही छैन पनि, जीबन मा धेरै बाधा हरु पार गरे धेरै भोगाई पनी छन तर तिम्रो धनवान प्रेम सग मैले जुहारी खेलन सकिन स्वार्थी।
थाहा छ मलाई मेरो प्रेम एकतर्फ़ी छ, तर मलाई यसको आभास म तिम्रो प्रेम मा भीजिसके पछि थाहा भयो। तिमि मैले जस्तै माया अरु कसैलाई गर्छौ तर म तिमीलाई, हामि एक अर्काको लागि बनेका होइनौ तिमीले नै भनेको थियौ र मैले बुझेको पनी थिए। तिम्रा नयन बाट अश्रुधारा बिगाएर पूरा रात रोएकी थियौ,यही कारण की हामी एक अर्काको बन्धन मा बांधिएर जिउन सकदैनौ, समाज ले अनुमति दिदैन। सायद तिमीले आफ्नो मस्तिष्क बाट यि पल हटाइसकेकि छौ, संगै बसेका ति दिन घुमेका पल गफ गर्दै जादा झरने ठाउँ भुलेर फेरि फर्किएको क्षण। मैले कहिल्यै तिम्रो प्रेम को आभास गरिन र अब गर्ने पनी छैन। तिमि झूट को बगैचा बनाएर मलाई भुलाउदै थियौ म सत्यता सम्झेर आँखा चिमलेर तिमिसग प्रेम महल बनाउदै थिए। कस्तो अभिनय गरेकी है तिमीले दुनिया भन्दा बाठो समझने म आफुले तिम्रो डब्लिकेट प्रेम को अभिनय लाई छुट्याउन सकिन। मेरा क्यानभास मा तिम्रा चित्र र चरित्र यसरी नै कोरिए न म बदलन सके न तिमीलाई बदल्न सके!
एक तमास ले सोचने गर्छु। कस्तो मन हूंदो नारी को पनी। कुनै दिन संसार को सबै भन्दा ठुलो मन र सबै भन्दा बढ़ी माया गर्ने मायालु भन्ने बिस्वाश थियो। आज भोली लाग्छ उ संसार कै कठोर स्त्री हो जो सग माया को एक रत्ती पनी अंस छैन म प्रति एक दरार हो जहाँ चोट सिबाय केहि छैन मेरो लागि, कठै म कुनै दिन तिमिसग दिनको आधा हिस्सा च्याट मा बितने गर्दथ्यो आज भोली तिम्रै स्मृति को कथा लेखदा जान्छ। यो दिन यो प्रहर यो समय कसले कल्पना गरेको थियो र। म झसंग हुन्छु त्यो दिन समझेर कुनै दिन मलाई भेट्न तिम्रो कलेज को काम हुन्थ्यो एकै दिनमा हानियर काठमाण्डौ पुग्थ्यौ तिमि। कति सजिलै म्यानेज हुन्थ्यो। तर आज त्यही मान्छे म अनि तिमि मेरो लागि समय हुदैन त्यही भेट लाई। तिम्रो अफिश टाइममा हामि खै के खोला हो त्यो तीर मा गएर बस्दा भेट भएको एक जना प्रहरी भोली पल्ट अफिश मा खुलेको टेण्डर मा भेट हूदा पानी पानी भए म भनेर मलाई अंगालो मारेर रोएको थियौ जसले देखोस बाबा हामि सधै एक छौ। मलाई छाड़ी न जानु है। हाम्रो प्रत्येक भेट मा3पल बीतने गर्दथे पहिलो हामि भेटीएर खुसी हुन्थयौ दोस्रो कुनै न कुनै बाहाना मा रिसाएर नबोल्ने र रुने तेस्रो फेरि मिल्ने रअझै बढ़ी माया ले अंगालो मार्ने। तिम्रो प्रेम मलाई यस्तो ड्रग भयो की जहां मलाई भौतिक कमी केहि छैन। शहर मा राम्रै आम्दानी हुने जागीर छ हिडन लाई सबारी छ,घरपरिवार छ। मध्यम बर्गीय सोसाइटी मा हिडन मलाई कुनै अभाब छैन। तर मेरो मुटुमा नभए को ठाउँ बनायौ राज गरयौ फेरि खाली छोडेर गयौ। अब मैले त्यो ठाउँ न खाली राख्न सक्छु सारै पोल्छ मुटु न भतकाउन सक्छु म ति याद बिना बाचन सकदिन।
दुनिया सग नफरत लाग्छ आज भोली की संसार प्रेमिल बन्धन ले चलेको छ। मलाई सत्य घृणा लाग्छ यो प्रेम को लिगेसी सग नै। यहाँ बढ़ी मान्छे तिनिहरु बाट नै पीड़ित छन जसले भौतिक भोग र सयल मात्र ठुलो देखछ। बैराग्य ले मन मा एक तमास तहल्का मच्चएको छ। थाहा छैन यसको आकार कस्तो र कत्रो हुन्छ। तर औधि उर्लन मन छ औधि हंगामा गर्न मन छ, किन मलाई यो बाध्य पारियो भनेर। मेरो आकार र हुँकार ले तिमि टसको मस हुन्न भन्ने तिम्रो घमण्ड एकै निमेष मा भत्काउने क्षमता देखाइदिन मन छ। नेपाली गजल को जस्तो बिना नियम र सन्धि हरुको ठेली जस्तो लाग्छ तिम्रो कसम आजभोली मलाई तँ बदलिस भनेर तिमीले हिलो छ्यापेर आफु निर्दोष या पवित्र बन्न खोज्नु नै तिमि परिबर्तन भएको हौ भन्ने यथेष्ठ प्रमाण हो। मलाई कुनै अदालती बहस जस्तो प्रक्रिया नै चाहिहेको छैन। म भित्र यतिका चेतना अझै जीवित छन,की परिबर्तन र परिबर्तित को बस्तुगत र बैचारिक डिफेन्स राम्रो सग गर्छु। हिजो तिम्रो जिन्दगी नया मोड़ बाट शुरू हुदै गर्दा तिमीले घोषणा गरेका नियमन र संघीय कानून को प्रत्याभूत आचारसंहिता र पालना गर्नुपर्ने धारा हरु खोलेर हेर त तिमीलाई आफै कति घृणित छू भन्ने छरलंग हुन्छ नभए तिमीलाई त्यो महसूस गराउन सकने यथेष्ठ प्रमाण हरु म प्रेम अदालत मा दाखिला गर्न सक्छु तिमि सरासर प्रेम अपराधी ठहर हुन्छौ, तर म तिमि हारेको देख्न सक्दिन यही रैछ प्रेम भन्ने असमान बिधाता आफ्नो माँन्छे जसलाई माया गरिन्छ उसले जे गरे पनी सहन गर्ने।
मन भित्र राखेको माँन्छे एकाएक परिवर्तन हूदा त्यो भन्दा ठुलो पीड़ा केहि हूंदो रैनछ। यस्तो लाग्छ मलाई कहिलै नबिसाउने भारी बोकेको छू। हो सानू मैले तिम्रो यादको भारीले हरेकदिन थिचिएर बाचेको छू। छाती को ज्वाला छाला चिरेर बाहिर निस्केला जस्तै हुन्छ तिम्रो समझनाले। मलाई हरेकदिन रक्सी को नशा बसेको छ। तिम्रो याद सग खेल्न सधै पिउने गर्छु। टोल तीर अचेल मेरो हालत देखेर छि छि दूरदूर गरेका छन। तर तिनिहरुलाई के थाहा आफु बहुलाएर आफ्नो याद सग खुसी छ भन्ने कूरा। दुइ नग्न शरीर जोडीएर प्रेम सोचेकि तिमीले हिजो मसग र आज अरु कोही सग जोडीदैमा प्रेम बस्ने भन्ने सोच हो भने तिमि गलत हौ। तिमीलाई थाहा छ मेरो चाहना कामयुद्द मात्र हो भने केटि मेरा लागि केहि होइनन।हरेकदिन फेरिदिन सकने ल्याकत राख्छु। तर तिम्रो प्रेम सत्य सोचेर तिमीले जसो भनेऊ म त्यसै गर्दै गए तिम्रो चाहना मलाई एक्लाउने रहेछ मैले बुझ्न सकिन। सोसल एकाउन्ट का साथी भाई हरु लाई टाढा बनाउन लगायौ। कति बिस्वाश का साथ भनेऊ म भए हजूर लाई कोही अरु चाहिन्छ र? मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो तर आज तिमि कसैको सिन्दूर लगाएर गयौ। मलाई सदा सदा को लागि मारेर। बिहे हुदै गर्दा भनेकी थियौ बाबा म हजूर लाई माया मारने छैन आधा आकास मेरो जिन्दगी मा हजुरकै हिस्सा मा छ। हाम्रो भेट हाम्रो फोन हाम्रो च्याट जो छ चलिरहेको छ र चलिरहने छ। बिहेको निम्तो गरेउ धेरै रोएर मैले हजूर पाउंन सकिन बाबा तपाइको काख मेरो जिन्दगी को लेखान्त रहेनछ। माया नमारनु है म त भौतिक शरीर जहां भए पनी मन र याद हजूरक़ै याद र प्रेम मा हुनेछ। बिहेको दिन आयो मनलाई रोकन सकिन पसल मा गएर अलिकति रक्सी पिए मन उडेको थियो कहा जाऊ के गरौ। या आफैलाइ समाप्त गरौ। अकस्मात साँझ मा तिम्रो नम्बर बाट कल आयो बाबा आउनु भएन है! म त सबैकाम सकेर तपाईलाई कल हानेको कस्तो रोए म मलाई सबैले के भने होलान। बाबा म भोली कूरा गर्छु धेरै मिसगरेकी छू। फोन काटियो मर्न रहर लागेको मेरो मन एकाएक बदलियो बिहेको दिन मलाई कल गर्ने मेरी माया दुनिया कै पहिले प्रेमिका हो जसले पराइको डोली लाई बेवस्ता गरि आफ्नो प्रेम लाई पुकारेकी छ। म खुसी भए सानू त्यो दिन, दिन बितदै गए पराइको अंगालो मेरो भन्दा न्यानो हुदै गयो उसका जिबनशैली उठबस भीआईपी हुदै गए मलाई आउने कल एसएमएस पतालिदै गए मैले किन भन्दा समय छैन भन्ने जबाफ आउन थाले। आज सम्म आईपुग्दा हाम्रो च्याट कल एसएमएस बन्द नै छ आखिर किन? पैसा र संसर्ग मा लिप्त भएर त्यो माया भुलेकि तिमीलाई मैले अब केभनु। परिबारिक बाध्यता हुन्छन मैले कहिलै भनेको छू र त्यो नमान। तिम्रो आफ्नो पनी संसार छ आफ्नो कर्तब्य छ त्यो पनी निभाउन पर्छ। तर यो पहीले नै थाहा थियो भोली हामि आफ्नो आफ्नो संसार मा उभिनु पर्छ। तर पनी हामिले एउटा भद्र सहमति गरेका थियौ हामि प्रेम जीवित राख्ने छौ। तर धोका किन? मलाई हरेकदिन यही प्रश्न ले सताएको छ सानू। दिनको सुरुवात देखी प्रयोग हुने ईमेल इन्टरनेट फेसबुक टुइटर आज पनी तिम्रो नामको पासवर्ड ले खुल्ने गर्छन। तिम्रो प्रेम तिमिसग का पल जीवित गर्न मोबाइल एप्लीकेशन पनी तिम्रो फोन नम्बर ले एक्टीब छन आज सम्म। एक यथार्थ एकदिन म अकाल मैं मरने छू पक्कै तिम्रो प्रेम को खातिर। मेरो नम्बर हेरेर तिम्रो आखा बाट आँसू झरने छ त्यो दिन तर म परलोक हुनेछु तिमिलाई एकपल एक सब्द बाबा आई लभ यू भन्ने मन होला बेकार हुनेछन त्यति बेला तिम्रा प्रयास र मेरो मृत्यु पछिको समय। आज मौन छौ धनवान जिबनशैली को कारण भोली तिमि सग म हुने छैन थाहा छ! अक्सर गरीब हरु चाडो मरने गर्छन धनी को तुलनामा।
खैर, मैले यो भनिरहदा तिम्रो हासो नरोकिएला तिमि आफ्नो कारण ले म पछारिएको देख्दा कबड्डी खेल मा जितेको उन्माद मनाउदै हुनेछौ। किनकी तिमिमा यती सोचने शक्ति नै नसीएको छ। अब पैसा एस र भौतिकता को पछि लागेर तिमि इकोनोमी भएकी छौ। तिम्रो अघि आँसू बेदना र बिताएका तथा बितेका पल को कुनै मूल्य हुदैन। तर म र तिमि भन्दा माथि एक आस्थारूपी ईश्वर को स्थान छ हिसाब र दण्ड मा भगवान ले आफ्नो बिरानो भन्दैननं मैले नचाहेर पनी त्यो दण्ड मैले देख्न नपरोस भन्ने चाहना छ।आई लभ यू बाबा….. आई ….लभ… यू…..